असमान समुदायहरूबीच समान अधिकारले समानता कायम गर्छ कि असमानतालाई नै मलजल गर्छ ? समस्या विशिष्ट खालको छ भने समाधान साधारण खालको हुँदा सही समाधान निस्कन सक्छ ? क्यान्सर भएको र चोटपटक लागेकोमा एउटै उपचारले निको पार्न सकिन्छ ?
समानुपातिकमा राजनीतिक बेइमानी
यस पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका बन्दसूची विवादित र आलोचित भएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातमै दलहरूले समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई नातावाद, कृपावाद, अर्थवाद, प्रेमवादद्वारा विकृत गरे ।